BrightTALK Benchmark Report: Omume kachasị mma maka ịkwalite Webinar gị | Martech Zone
BrightTALK Benchmark Report: Omume kachasị mma maka ịkwalite Webinar gị
Saturday, July 14, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
BrightTALK, nke na-ebipụta data webinar benchmark kemgbe 2010, nyochaa ihe karịrị webinars 14,000, ozi ịntanetị 300 nde, ndepụta na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ngụkọta nke nde awa 1.2 nke itinye aka na afọ gara aga. Nkwupụta a kwa afọ na-enyere ndị na-ere ahịa B2B aka ịtụle ọrụ ha na nke ụlọ ọrụ ha ma hụ omume ndị na-eduga n'inwe ihe ịga nke ọma.
Budata Nkwupụta benchmark
Na 2017, ndị sonyere nọrọ otu nkezi nke 42 nkeji na-ekiri webinar ọ bụla, mmụba 27 na-arị elu kwa afọ site na 2016.
Ntughari email na ntinye aha webinar dị elu karịa 31 pasent site na afọ gara aga, ihe si na ntughari nke ndi ahia kariri ihe omuma banyere ihe ndi mmadu choro.
Ọnụ ọgụgụ nke webinars zuru ezu na ikpo okwu BrightTALK mụbara pasent 40 kwa afọ, na-atụ aro na webinars na okwu ọkachamara bụ ngwa ọrụ dị mkpa na ahịa ọkụ ọkụ na-ere ọkụ.
Webinars na-agbanwe n'ime na-ina video ọdịnaya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke nlele webinar na-ewere ọnọdụ na ụbọchị iri mbụ na-esote ihe omume ahụ.
Otu esi eme ka webinar gi kwalite
Ikekwe ozi kachasị baa uru m chọtara na akụkọ ahụ bụ na atụmatụ iji kwalite webinar gị iji bulie ndị bịara abịa. Maka ndị ahịa anyị, webinars na-aga n'ihu ịbụ akụ dị egwu nke ndị ndu. Anyị achọpụtala na ndị mmadụ na-aga webinars dịkarịsịrị omimi na usoro ịzụ ahịa na-achọ imezi ma ọ bụ mụtakwuo banyere ego ha ga-etinye. Okwu ahụ bụ, n'ezie, otu ị ga-esi mee ka ọtụtụ atụmanya dịka ị nwere ike ebe ahụ.
Daalụ - BrightTALK na-enye ụfọdụ ezigbo omume kachasị mma ebe ahụ:
Mmemme webinar na-ahụ ihe ịga nke ọma mgbe ha dị akwalite n'oge (izu 3-4), ma gaa n'ihu na ụbọchị ndụ.
Imirikiti ndị na-ege gị ntị ga-enwe debanye aha n'ime izu abụọ nke ihe omume dị ndụ. Ọnụ ọgụgụ ndị a anọgidewo na-agbanwe agbanwe n'ime afọ atọ gara aga.
Brighttalk na-atụ aro iziga nkwalite email atọ raara onwe ya nye, na nke ikpeazụ n'ụbọchị webinar n'onwe ya.
Ntughari email n'ihi na webinars dị elu 31% karịa ọnwa 12 gara aga, na 35% na ngwụsị izu
Mgbanwe ọnụego maka ịkwalite webinars bụ n'ezie dịtụ larịị na-arụ ọrụ izu, na Tuesday na-arụ ọrụ kacha mma.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-abịa ndụ dị larịị Mọnde ruo Tọzdee ma gbanye 8% na Fraịde.
The oge kacha mma iji hazie webinar ọ bụ 8:00 nke ụtụtụ ruo 9:00 nke ụtụtụ (PDT, North America).
BrightTALK ndị ahịa chụpụrụ 46% nke ndebanye aha ha na webinar site na nkwalite nke ha (email, mgbasa ozi, na-elekọta mmadụ, wdg) na ịkwụ ụgwọ ndị akwụrụ ụgwọ dị nso na 36%. 17% nke ndu sitere na okporo ụzọ okporo ụzọ.
Aga m akwado ịkwado ma gụọ akụkọ zuru ezu nke BrightTALK tinyere, enwere uru dị na akụkọ benchmark a!
BrightTALK na-eweta ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ achụmnta ego ọnụ iji mụta ma too. Ihe karịrị nde ndị ọkachamara 7 na-etinye ihe karịrị 75,000 okwu efu na nzukọ 1,000 n'ịntanetị iji chọpụta teknụzụ ọhụrụ, mụta n'aka ndị ọkachamara tụkwasịrị obi ma welie ọrụ ha. Ọtụtụ puku azụmaahịa na-eji ọdịnaya BrightTALK nke AI kwadoro ma na-achọ usoro ikpo okwu iji bulie ego ha ga enweta. BrightTALK hiwere na 2002 ma bulie ihe karịrị $ 30 nde na isi obodo. Ndị ahịa gụnyere Symantec, JP Morgan, BNY Mellon, Microsoft, Cisco na Amazon Web Services.
Tags: gbamgbammmemme ahiaWebinar Ahịawebinar ahịankwalite webinar
WordPress: Etu esi edepụta akwụkwọ ụmụaka (Ihe kachasị ọhụrụ m)